ဖီး ဆုတံဆိပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖီး ဆုတံဆိပ် (Fields Medal) သည် သင်္ချာသုတေသနဆိုင်ရာ ဆုတံဆိပ်ဖြစ်ပြီး သင်္ချာလောကတွင် အမြင့်ဆုံး ဆုတံဆိပ်တစ်ခုအဖြစ် ယူဆကြသည်။ နိုင်ငံတကာ သင်္ချာသမဂ္ဂ (International Mathematical Union) က ကြီးမှူး၍ အများအားဖြင့် လေးနှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပသည့် သင်္ချာပညာရှင်များ၏ နိုင်ငံတကာညီလာခံ (International Congress of Mathematicians) တွင် ဤဆုတံဆိပ်ကို အသက် ၄၀ အောက် ထူးချွန်ပညာရှင် နှစ်ဦးမှ လေးဦးအထိအား ချီးမြှင့်လေ့ရှိသည်။
ဖီး ဆုတံဆိပ် (Fields Medal)
ဖီး ဆုတံဆိပ်ဒင်္ဂါး၏ ခေါင်းပိုင်း
သင်္ချာသုတေသနတွင် ရရှိပြီးသော ထူးချွန်အောင်မြင်မှုများနှင့် အနာဂတ် အောင်မြင်မှု အလားအလာကောင်းများ အတွက် [မှတ်စု ၁]
နိုင်ငံတကာ သင်္ချာသမဂ္ဂ (International Mathematical Union (IMU))
နိုဘဲလ်ဆုကို သင်္ချာဆိုင်ရာ သုတေသနအတွက် သီးသန့် ချီးမြှင့်ခြင်းမရှိရာ၊ အာဘဲလ်ဆု (Abel Prize) နှင့် ဤ ဖီး ဆုတံဆိပ် နှစ်ခုကို သင်္ချာဆိုင်ရာ နိုဘဲလ်ဆုများဟု ခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ အာဘဲလ်ဆုနှင့် မတူသည့် အချက်မှာ ဖီး ဆုတံဆိပ်ကို အသက် ၄၀ မကျော်သေးသည့် သင်္ချာပညာရှင်များကိုသာ ချီးမြှင့်နိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရရှိပြီးသည့် ထူးချွန်အောင်မြင်မှုများကိုသာ ဂုဏ်ပြုရန်မဟုတ်ဘဲ ထူးချွန်သည့် တက်သစ်စ လူငယ်ပညာရှင်များကို အနာဂတ် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အတွက် ပံ့ပိုးလို၍ ဖြစ်သည်။
ဆုတံဆိပ်ဒင်္ဂါးနှင့်အတူ ဆုငွေပါ ချီးမြှင့်လေ့ရှိပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ ၎င်းဆုငွေပမာဏမှာ ကနေဒါနိုင်ငံသုံးဒေါ်လာ ၁၅,၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ဤ ဆုတံဆိပ် ဖြစ်မြောက်လာရန် အခရာကျကျ ကျိုးပမ်းခဲ့သူ၊ ဤ ဆုတံဆိပ်ဒင်္ဂါး ဒီဇိုင်းကို ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲခဲ့သူ၊ ဆုငွေချီးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် ရန်ပုံငွေ မတည်ပေးခဲ့သူ ကနေဒါသား သင်္ချာပညာရှင် ဂျွန် ချားလ် ဖီး (John Charles Fields) ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဖီး ဆုတံဆိပ်ဟု အမည်မှည့်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤဆုတံဆိပ်ကို ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် ဖင်လန်သား သင်္ချာပညာရှင် လားစ် အာဖော် (Lars Ahlfors) နှင့် အမေရိကန်သား သင်္ချာပညာရှင် ဂျက်ဆီ ဒေါက်ကလပ် (Jesse Douglas) တို့အား စတင်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၃၆ ခုနှစ် နှင့် ၁၉၅၀ ခုနှစ်များ အကြားတွင် (ကမ္ဘာစစ်ကြောင့်) ဆု ချီးမြှင့်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။ စစ်လွန်ခေတ်တွင် ၁၉၅၀ ခုနှစ်မှစ၍ နောက်ဆုံး ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ လေးနှစ်တစ်ကြိမ် မပျက်မကွက် ပြန်လည်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
↑ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ မူရင်းမှာ "to recognize outstanding mathematical achievement for existing work and for the promise of future achievement" ဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ IMU.
↑ Barran & Weisstein.
↑ ၃.၀ ၃.၁ Fields.
Barran၊ Michel; Weisstein၊ Eric W.၊ "Fields Medal"၊ MathWorld--A Wolfram Web Resource၊ Wolfram Research, Inc.၊ March 5, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
Fields Institute၊ The Fields Medal၊ Fields Institute၊ March 5, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
IMU၊ Fields Medal Details၊ International Mathematical Union၊ March 5, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖီး_ဆုတံဆိပ်&oldid=362566" မှ ရယူရန်
၁၈ ဧပြီ ၂၀၁၇၊ ၁၆:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဧပြီ ၂၀၁၇၊ ၁၆:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။